> Resource > Lugood > Sida loo Isticmaalo goolkii barbaraha ee Lugood
Lugood barbaraha, sidoo kale loo yaqaan EQ ama 10-band barbaraha graphic , anfacaya dhisay barbaraha in aynu aad go'aansato band aad doorato in la kordhiyo, ama hoos u dhac inta jeer (Hz, Hertz).
Lugood barbaraha ayaa waxaa ka mid ahaa 20+ presets, waayo, waxaad si fudud in la beddelo codka asalka ah ee aad music, oo ay ka mid Electronic, Jazz, R & B, Rock, iwm Tusaale ahaan, Haddii aad dooratid "Electronic", guutooyinkii reer darfaheeda hoose iyo darfihiisa sare ayaa loogu qaado ilaa. Tani waxay ka dhigi doonaa saameyn la dareemi karo ee codadka sida style elektaroonik ah. Waxa kale oo aad ka dhigi kara presets kuu gaar ah oo ay guji dhibicda sare hoos liiska. Waxaa Hel by Windows> barbaraha ama si fudud Xulashada + Command + 2
Faham barbaraha Slider kasta
Haddii aad rabto in aad caado goobaha barbaraha, waxaad u baahan tahay in la fahmo waxa kasta slide Lugood barbaraha ka dhigan tahay.
32 Hz : Tani waa inta jeer ee xulashada ugu hooseeya ee barbaraha Lugood ah. Tani waxay ka dhigan tahay ugu hooseeya ee Bass ama laad fuusto mowjad.
64 Hz : Tani waxay inta jeer Bass labaad bilaabo inuu noqdo maqli karo ee ku hadla hufan. Haddana, inta badan alaabtii muusikada Bass iyo durbaanka doono in gobolkan.
125 Hz : hadla badan oo yar yar, sida in aad laptop, oo ku saabsan kaliya qaban karaa inta jeer wixii macluumaad Bass. Sidaa darteed, haddii aad u celin ilaa, waxaad maqli doonaa hoose ka badan ee isku dhafka ah.
250 Hz : kabanka iyo Biyaanada yeelan doonaan xaddi weyn oo tabarta yar ee kala duwan inta jeer this.
500 Hz : Qaar ka mid ah dhammaadka hoose ee vocals iyo mids oo ah alaabta Bass halkan fadhiya ee isku dhafka ah.
1K : alaabtii muusikada sida kabanka, Biyaanada Inta badan, iyo dabin fuusto deggan gobolkan.
2k : inta jeer waxaa la mid ah in aad codkaaga ka dhigaysa marka aad qaban sankaaga iyo hadal.
4K : 4k waa inta jeer ee ugu weyn in qayb weyn oo ah alaabta badan oo kabanka badan oo koronto ku fariistaan.
8K : Inta badan suxuun laysku garaaco iyo hi-koofiyadaha la kulantay gobolka. Kala duwan ayaa sare ee synths, Biyaanada, kabanka iyo vocals badan oo ay leeyihiin macluumaad badan oo kala duwan this.
16K : aadanuhu waxay maqli karaan oo kaliya kor ku 20K, sidaa darteed, tani waa dhamaadkii sare run. Haddii aad kor u kac, keegag aad dhawaaqi doonaa "sizzly".
Eebaha barbaraha Settings?
Qof ayaa ahbaa meel goolka barbaraha kaamil ah? Ma waxaad raadinaya? Anigu ma qabo inay jirto meel ka Lugood barbaraha kaamil ah, laakiin waxaad heli kartaa isku day ah. Halkan waxa ku jira goobaha soo jeediyay.
+3, +6, +9, +7, +6, +5, +7, +9, +11, +8 (slider kasta ka bidix ilaa midig)
Lugood barbaraha Talo:
1. Isticmaal Command + Xulashada + 2 ama Ctrl + Shift + 2 in la furo Lugood barbaraha si deg deg ah.
2. Isticmaalka barbaraha wax Lugood dejinta ahayn "guri" oo macnaheedu yahay in saamayn gaar ah ay ku codsatay in ay codka. Waad mar dambe ma aad muusiko dhageysato sida duubay sayidkii.
3. Waxaa MAYA wax barbaraha 'kaamil ah' Lugood yahay. Goobaha barbaraha ah in ay curiyaan codka wanaagsan u badan tahay waxaa laga yaabaa in aan la aqbali karin in qof kale. Kaliya hal wax si loo xaqiijiyo: By codsanaya barbaraha Lugood, dhawaaqa waa ka yar "run" ka badan hal asalka.